Akụkọ - isi atọ nke ala, isi asaa nke nrụnye, ọtụtụ ndị mmadụ na -eleghara nkọwa ndị a nke nrụnye ala anya!
Vinyl Pịa cutter
Isi ala atọ, isi asaa nke nrụnye, ọtụtụ ndị mmadụ na -eleghara nkọwa ndị a nke nrụnye ala anya!
A na-ekwukarị na ụlọ nrụpụta ụlọ na ala ụlọ osisi bụ “ala nwere ntụpọ atọ na ntinye isi asaa”, ya bụ, nrụnye dị mma ma ọ bụ na-ekpebi 70% nke ịdị mma ala. Iji ala eme ihe na -adịghị mma bụ ihe kpatara nrụrụ ala adịghị mma.
Ya mere, iji mee ka ala ahụ dị ọhụrụ dịka ọ dị ọhụrụ, ọ bụghị naanị maka ịdị mma na ịdị mma nke ala, kamakwa maka nrụnye ziri ezi na iji nlezianya na -arụzi ya. Taa, anyị ga -eleba anya na nkọwa ụlọ a na -ete n'ala!
Nkwadebe pavement ga -adịrịrị
Nnyocha zuru oke nke ebe a na -ete paịụ tupu imepe ụlọ bụ igodo, nke bụ njikọ dị mkpa iji hụ na mma paịlị.
Ngwa ngwa ezughị. A na -atọgbọ ala ya na -enweghị nyocha zuru oke nke gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ibute nsogbu dị mma. Tupu ịmeghe ụzọ, mee isi ihe 7 a wee bido mechie.
Nke mbụ, tụọ ọdịnaya mmiri ala
Jiri mita ọdịnaya mmiri iji tụọ ọdịnaya mmiri ala, ọkọlọtọ ala bụ <20%, na nrụnye geothermal nrụnye bụ <10%.
Ihe dị n'ime mmiri nke ala a kwụrụ akwụdo dị oke elu, na ala na -amịkọrọ mmiri ma gbasaa, nke dị mfe ịkpata nsogbu dịka arching, drumming, na mkpọtụ. Dehumidification dị mkpa n'oge a iji zere nsogbu na ojiji ọzọ.
Nke abụọ, na mgbakwunye na ala SPC, ekwesịrị ịlele ala osisi maka termites
Ebe mgbaba nke ndagwurugwu dị otu puku kilomita adaala, ekwuru bụkwa nnukwu ihe ize ndụ. A ga -emerịrị nyocha na ọrụ mgbochi tupu nrụnye, ma ọ bụghị, ọ ga -anọ ọdụ mgbe achọpụtara ha.
Nke atọ, lelee ịdị larịị nke ala
Ọ bụrụ na ịdị larịị nke ala adịchaghị ka nke ọkọlọtọ, ọ dị mfe ịkpata nsogbu dịka mgbachi ihu, mgbagide, arching na mkpọtụ. A ga -arụrịrị ọrụ ọkwa ọkwa tupu ịmebe ụzọ.
Anyị na-ejikarị onye na-achị achị dị mita abụọ maka nha kapeeti. Ọ bụrụ na enwere oghere karịrị 3 mm ma ọ bụ ọbụlagodi 5 mm n'okpuru onye na -achị achị, ọ pụtara na ala ahụ enweghị ntụpọ ma gafere ihe ndị a chọrọ maka ala osisi.
Nke anọ, lelee ma ala siri ike
Ọ bụrụ na ala esighi ike, ịnwere ike iji ụkwụ gị kụọ ntụ ahụ. Nke a bụ ihe anyị na -ekwukarị. Ọdịiche a na -akpasu iwe dị ọcha mgbe ịwụnyechara ala. N'agbanyeghị otu i siri hichaa nkuku, ị ga -anọgide na -ekpuchi ala.
Ndị mmadụ na -eje ije n'ala na -arụgide nrụgide wee mee ka ntụ ahụ niile na -esi na nkwonkwo ụkwụ na -efe efe. Nke kpatara nke a bụ na nhazi ala adịghị mma nke ọma mgbe ala dara.
Ọ bụrụ na enwere oghere ma ọ bụ ihe ịtụnanya, ị kwesịrị ịhazigharị ala, ma ọ bụghị na ọ ga-emetụta ndụ ọrụ nke ala n'ụzọ dị mfe.
Nke ise, zere ọrụ ịjikọ ọnụ
Ekwesịrị ịrụ usoro nhazi ala mgbe emechara ma nabata ọrụ ala zoro ezo, ọrụ ụlọ, ọrụ mgbidi na ọrụ mmiri na ọkụ eletrik. Ọ bụrụ na ọrụ obe dị mfe imebi ala, ma ọ bụrụ na arụchaghị mgbidi ahụ, ajịrịja nkume ga -eme ka uzuzu na ncha. Nsogbu dị ka mmebi ala, yana nsogbu dịka ịchacha agba na mkpuchi n'ala ma mebie ihe ịchọ mma nke ala.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọrụ ịgwakọta, ibu ọrụ edoghị anya ga-emetụtakwa nchedo ikike.
Nke isii, ndụmọdụ injinị zoro ezo na akara
Tupu ịmalite ịrụ ụlọ, onye nwe ya kwesịrị igosi ebe ọrụ ahụ zoro ezo wee mee akara pụrụ iche iji zere mmebi nke ọkpọkọ mmiri agbakwunyere, ọkpọ ikuku, ahịrị ike na ahịrị nkwukọrịta n'oge a na -ewu ya, na izere mmebi nke abụọ nke ịchọ mma ahụ.
Nke asaa, ma usoro mgbochi mmiri adịghị (ala SPC adịghị mkpa ịlele ihe mgbochi mmiri)
Ala na -atụ egwu mmiri. Mgbe mmiri wakporo, ọ ga -enwe nsogbu dịka ọnya ọnya, mmụba na nkwarụ, na -eme ka ọ ghara ịdị irè. Ya mere, ịkwesịrị ịlele usoro mgbochi mmiri tupu ị mechie ụzọ yana ma enwere mgbapụta mmiri n'ụlọ. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ dị otu a, ekwesịrị ịgwọ ya tupu ịtọgbọ ala.
Asatọ, ịchọ mma bụ nnukwu mmemme. Obere mwepu nwere ike ibute nnukwu mmemme. Mgbe onye ọ bụla zụrụ ala mara mma wee chere maka nrụnye, echefula ọrụ mbido. Emere nkwadebe izizi nke ọma yana ụlọ dị mma.
Ụlọ ahịa ndị a na -ete n'ala mgbe niile nwere ndị isi nrụnye nke ha, ndị ga -enweta ọzụzụ dị n'otu tupu ha amalite ọrụ, yabụ enwere ike izere ihe ndị a.
Ọ bụrụ na ịzụta ala ahụ n'onwe gị wee were onye nrụnye ụgwọ ọrụ iche, mgbe ahụ ị ga -echeta isi ihe ndị a, ma kpachara anya tupu ị zere ọtụtụ nsogbu ~
Oge ezipụ: Jul-13-2021
Nabata ka ịkpọtụrụ
Ị ma ụdị ụlọ ala ọ bụla?
Ekele diri nne nne: Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na pati Kọmunist China anyị